Wasaarada Caafimaadka Puntland oo Komeer caafimaad ku bixisay Jaamacada Bariga Africa – SBC
Wasaarada Caafimaadka Puntland oo Komeer caafimaad ku bixisay Jaamacada Bariga Africa
Wasaarda caafimaadka Puntland oo howlaha malimaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka ka fuliyey goobaha wax barshadada ee Boosaaso
Waxaa maalmahaan guud haanba ka socday deegaanada Puntland gar ahaan magaladada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari talaalka caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.
Kor meer ay saaka sameeyeen wasaarada caafimaadka ee Puntland iyo hayadaha Unicef iyo WHO ayaa waxa ay kutageen schooladada iyo jamacadaha kuyaala magaalada Boosaaso halkaas oo ay waciyigaliin kasameeyeen talaalka maalimaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.
Waxaa ka mid ahaa meelaha ay booqashada ku tagtay wasaarda caaimaadka Puntland jaamacada Bariga africka halkaas oo ay wasaaradu gaysay Koox ka mid ah dadkii talaalka bixinayeey waxaa halkaas lagu talaalay ardayda jamacada Bariga africka oo u badnaa qabdho kuwaasi oo laga talaalay, talaalka teetanadada.
Ugu horeyn waxaa munaasabad kooban oo lagu qabtay hadal ka jeediyay hurmuudka caafimaadka Jaamcada Bariga Africa dr Abshir cali Abdi oo sheegay in maanta ay ku faraxsanyihiin boqashada ay wasaarada caaimaadka Puntland kutimi Jamacada Bariga africka sheegana in ay soo dhaweenayaan talaalka teetenada malimaha caaifmaadka hooyada iyo dhalaanka.
Sidoo kale waxaa iyagana dareekooda ka dhiibtay dhamaan ardaydii halkaas lagu talaalay soona dhaweeyey talaalka teetanada sheegana in ay faa ido uuleedahay dhamaan qeybaha bulshada isugu jira gaar ahaan hooyada iyo caruurta ayna rabaan talaaalka maalmaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.
Kormeerka wasaarada caafimaadka Puntland ay ka wado goobaha waxbarashadada ee Boosaaso waxaa hogaaminaysa Johra Muuse Cilmi oo ah madax caafimaadka aasaasiga ah ee xarunta gobolka Bari waxaana ay sharaxday fa’idada uu uleeyahay talaalka teetanada hooyo walbana lagarabo in ay istalaasho ubadkoodana ay talaalaan,
Johra o waxa kaloo ay sheegtay in ay maalmahaan wadeen maalimaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka ayna tahay maalintii afraad, maantana ay soobooqdeen jaamacada Bariga africka xaruunteeda Boosaaso, halkaas na ay kutalaaleen gabdho arday ah oo tiradooda gaaraysay 86 waxayna ay Johra o ugu baaqday dadka aaminsan in uu talaalku yahay wax aan jiriin ay istalaalaan ayna iska talaalaan cudurka teetanada oo ah cudur xun.
Ma ahan markii ugu horaysay ay wasraada caafimaadka Puntland sameeyso kormeerka talaaka caafimaadka hooyada iyo dhalaanka waxaa maalmahaan guud ahaanba laga dareemayaa deeganada Puntland talaalka teetanada maalmaha caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.